करोडौँका मालिक सुशान्तले किनेका थिए अन्तरिक्षमा जग्गा ! कति छ सम्पत्ति ? – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/करोडौँका मालिक सुशान्तले किनेका थिए अन्तरिक्षमा जग्गा ! कति छ सम्पत्ति ?
करोडौँका मालिक सुशान्तले किनेका थिए अन्तरिक्षमा जग्गा ! कति छ सम्पत्ति ?
254 1 minute read
एजेन्सी – बलिउडका चर्चित अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको एक साताअघि आफ्नै घरमा निधन भयो । उनले मुम्बईको बान्द्रास्थित आफ्नै घरको फेनमा पासो लगाएर आफ्नै ज्यान फाले । एक साताअघि निधन भएका सुशान्त करोडौका मालिक थिए । उनी ५९ करोड भारु बराबरको सम्पत्तिका मालिक थिए ।
उनको घरमा मंहगा कार र मोटरसाइकल पनि छन् । त्यति मात्र होइन उनको चन्द्रमामा पनि आफ्नै जग्गा रहेको बताइएको छ । सूर्य ,चन्द्रमामा, नक्षत्र ग्रह जस्ता ब्रम्हान्डिय वस्तुहरुबारे कुरा गरिरने उनी अन्तरिक्ष प्रेमी थिए ।
उनी आकाशमा हेरिरहने गर्थे । भारतिय मिडियाका अनुसार उनीसँग महंगो टेलिस्कोप भएको कपिल शर्माको शोमा खुलाएका थिए । उनले शनि ग्रहको चक्का हेर्न महंगो टेलिस्कोप खरिद गरेको भारतिय मिडियामा बताइएको छ ।
भगवान शिवजी भक्त रहेका उनले बेलाबेलामा सामाजिक सञ्जालमा ओमको ब्रम्हान्डिय महत्वबारे पनि बिभिन्न पोष्ट गरि रहने गर्थे । बाइक र गाडीका अत्यन्त सौखिन उनले घरमा स्टाइलिस बिएमडब्ल्यु के १३०० आर मोटरसाइकल, लक्जरी स्पोर्टस कार मासेरटी क्वात्रोपोर्ते र ल्यान्ड रोभर रेन्ज रोभर सभ राखेका थिए ।
सुशान्तले पासो लगाएर ज्यान फालेपनि परिवारले भने मृत्यु रहस्यमय भन्दै अनुसन्धानको माग गरेपछि मुम्बई प्रहरीले यस घटनालाई लिएर अनुसंधान गरिरहेको छ । प्रहरीले उनीसँग जोडीएका सबै जनासँग बयान लिइरहेको छ । सुशान्तको मृत्युको विषयलाई लिएर विभिन्न आरोप लगाउदै सलमान खानसहित बलिउडका ८ जनाविरुद्ध उजुरी दर्ता पनि भएको छ ।
कुखुराको मासु र अण्डाको मूल्य आकाशियो
कुलमानलाई आयल निगममा सिफारिस , आजै नियुक्ति
अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले सबै दर्सकलाई दीईन खुसीको खबर
बाबुरामलाई अभिनेत्री करिष्माको प्रश्न-‘एक दिन दुध चढाउँदा किन यत्रो रोइलो?’
ज्वाइँको उपचार गराउन काठमाडौं जाँदा कोरोना संक्रमण